पूर्वराजदूत केशव झा हत्याको एक वर्षसम्म किन पत्ता लागेन दोषी ? | Sagarmatha TV
पूर्वराजदूत केशव झा हत्याको एक वर्षसम्म किन पत्ता लागेन दोषी ?
काठामडौं । बबरमहललाई काठमाडौंको सुरक्षित र व्यवस्थित स्थान मानिन्छ । यही सुरक्षित स्थानमा घर मै सुतेका बेला फ्रान्सका लागि पूर्व नेपाली राजदूत केशवराज झाको हत्या भएको ठीक एक बर्ष पुगेको छ । तर, अहिले सम्म प्रहरीले हत्याराको सुईंको समेत पाएको छैन ।
यो बीचमा महानगरीय अपराध महाशाखाले अनुसन्धान गरिरहेको यो घटनाको अहिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान थालेको छ । प्रहरी अधिकारीका अनुसार हालसम्म हत्यारासम्म पुग्ने बलियो ‘क्लु’ भेटिएको छैन । आफ्नै निवासमा झाको हत्या कसले र किन ग¥यो भन्नेमै अनुसन्धान केन्द्रित छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डिएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार, हत्याको अनुसन्धानका लागि घटना लगत्तै पक्राउ परेर छुटेका सुरक्षा गार्ड काभ्रेका सानुकान्छा तामाङलाई पुनः पक्राउ गरि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
डिएसपी बोगटीका अनुसार, सानुकान्छा तामा¨ पुनः पक्राउ गर्नुको कारण जाहेरीमा स्पष्ट रुपमा उनकै नाम तोकेर आएको र उनको संलग्नता हुन सक्ने प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरिएको हो । अहिले, प्रहरीले एक बर्ष सम्म पनि दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचा हुन थालेको छ । तर प्रहरीका अधिकारी भने अनुसन्धान केही लम्बिएपनि दोषी पत्ता लगाएरै छाड्ने दाबी गर्छन् ।
सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भिर प्रश्न
आठ दशक उमेर नाघिसकेका मानिसको हत्या गर्ने हात कसको थियो भन्ने बारे सत्यतथ्य अहिले सम्म खुलेको छैन । प्रहरीले अब चा“डो भन्दा चा“डो जिज्ञासा मेट्ने मात्र होइन दोषीलाई कानुनी कठघरमा पु¥याउने काम गर्नुपर्छ । नत्र प्रहरीको शाख माथि नै थप प्रश्न उठ्ने पक्का ।
यस्तो छ घटनाबारे प्रहरी अशंका
पूर्वराजदूत झाले छोरा नेपालका आएको बेला बुढानीलकण्ठमा रहेको आफ्नो जग्गा हत्या हुनु केही समय अघि मात्र बेचेको खुलेको थियो उनले बेचेको जग्गाको पैसा आफैंस“ग रहेको बुझेर आर्थिक प्रलोभनमा परेर हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । अहिले प्रहरीले त्यसैलाई केन्द्रित गरेर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।